トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Zabasebenzi ngokuvamile sasemakhazeni pachinko kunzima ukunciphisa ukuze ikhasimende
■ Yiziphi isiqala
emva zonke pachinko emakhazeni zokuphatha, kanye nokwehla ibhola uvela yokuthengisa, yingakho kuba izithakazelo inkampani lokususa izindleko ezihlukahlukene.
Ngamanye amazwi, uma ukusetshenziswa kakhulu izindleko, uzobe usike imali ibe ngu- ikhasimende kusukela inani yokuthengisa. Ngezikhathi ezinjalo, ukusebenza kwe-microphone kanye Illuminations, umculo kanye nokunye okufana nalokho, ngakho ukuqondisa ukuthi ukushuba Cishe, ake Ungakhohliswa. Faka
isihloko, kodwa kukhona zabasebenzi komunye walabo akhawunti for a isisindo esikhulu izindleko Pachinkoya. Njengoba siphuma kungenzeka ukuthi asikwazi kwehliswa wenkokhelo ukuze ikhasimende futhi lapha kakhulu ukusebenzisa imali, kodwa thina kufanele uhlole njengoba omunye izinkomba.
ezifanele zabasebenzi of pachinko eshintsha, ingabe inombolo kakhulu ezidingekayo zabantu?
pachinko izitolo, nezitolo sethule uhlelo ukubala wenkokhelo ngokuzenzakalelayo ngokuthi uhlelo siqu, noma ube ibhokisi igcwele ibholo ebhokisini dollar, uma uya ekhaya, cela ukuba flow ngokuthi isisebenzi noma, ingahlukaniswa ibe yaba pa o kohlelo evamile. Ekhuluma umsebenzi abasebenzi
pachinko eshintsha ukuthi sethule uhlelo siqu, kuzoba kuphela processing ngokuvamile enkingeni. Ngo-pachinko eshintsha nicabanga ne Ukugcizelelwa kwamakhasimende, manje ziye yethulwa eziningi. Esikhathini izinhlelo siqu, abasebenzi, kanye patrol kugxilwe kukona esiqhingini kakhulu, noma isixwayiso sokuthi uma azikho amakhasimende asolisayo, ngeke siphinde sibe kuphela mayelana nalokho pachinko umshini wokuhlanza ukuthi noma impendulo yombuzo wakho. Ngoba
, kuyoba okwanele ukubeka ezintathu amayunithi 300 emgodini esuka kubantu ababili. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yokuthi ikhasimende, masenze konke wedwa, kulungile nale isibalo sabantu, kungakhathaliseki ukusebenza. Ngo-pachinko emakhazeni siqu uhlelo isingeniso, uma le nombolo noma ngaphezulu abasebenzi kwadingeka, ungase ube zabasebenzi kakhulu.
_ x000D_ noHezekeli, e wamakhaza pachinko okuyinto evulekile ohlelweni evamile, sesiye ngempela ukuthi inani labasebenzi ezidingekayo. I eshintsha pachinko ukuthi sethule uhlelo siqu, ngoba bomsebenzi ukuza nhlobo ezahlukene. Esimisweni ejwayelekile, exchange of ukheshi inkomo, umsebenzi ngidlula ibhola zamadola ibhokisi jet esiphikisayo, ithebula zokuxazulula inkinga, pachinko umshini yokuhlanza, siba nokwesekwa kwamakhasimende kanye nomsebenzi ahlukahlukene. Njengoba oyokwenziwa enkonzweni
bonke abasebenzi, uma ukukhiqizwa ukhuphuka, sekuyinto abasebenzi ezidingekayo ukuthi lemali.
namuhla, lapho kokuba inciphise inani abasebenzi nje ngoba ngakho isikhathi, noma yini ukusebenza ithuba iba ngcono, isevisi ngeke enganakiwe maduze. Ukuze gwema into enjalo, e-pachinko eshintsha ngazo zithatha uhlelo evamile, uma kukhona eziningi efakwe amayunithi mayelana 300, kusukela abasebenzi ezine eziyisithupha kufanele ukuya emsebenzini nsuku zonke.
lokhu, ngisho noma lesi simiso agodle ngisho usuku ngaphandle egijima, ze guquka.
Ngakho, nakuba evamile abasebenzi pachinko emakhazeni isikhathi kungenzeka kohlelo, kuyoba indlela kungekho zabasebenzi. Ngo ukusebenza
nsuku akukho eshintsha pachinko, yebo ngoba kungenzeka futhi ukuthi yokusebenzisa zabasebenzi alisho sebekubeke, cabanga jikelele. Ngale ndlela, iqiniso lokuthi yini noma cha kukhona yokusebenzisa zabasebenzi, kuzohluka kakhulu kuye ngokuthi uhlelo isingeniso.
Uma Kakare eziningi zabasebenzi, umthelela uyaphuma kungekho wenkokhelo elincane, kulungile. Noma wamakhaza pachinko ukuya nawe, pachinko eshintsha usebenzisa zabasebenzi nokumosha Izindleko, zama observation kancane. Umsebenzi, ithebula zokuxazulula inkinga, pachinko umshini yokuhlanza, siba nokwesekwa kwamakhasimende kanye nomsebenzi ahlukahlukene. Njengoba oyokwenziwa enkonzweni
Uma Kakare eziningi zabasebenzi, umthelela uyaphuma kungekho wenkokhelo elincane, kulungile. Noma wamakhaza pachinko ukuya nawe, pachinko eshintsha usebenzisa zabasebenzi nokumosha Izindleko, zama observation kancane. It uya emsebenzini.
Uma Kakare eziningi zabasebenzi, umthelela uyaphuma kungekho wenkokhelo elincane, kulungile. Noma wamakhaza pachinko ukuya nawe, pachinko eshintsha usebenzisa zabasebenzi nokumosha Izindleko, zama observation kancane.